Mpanorina tranonkalam-baovao sady tonian-dahatsoratra nametra-pialana noho ny tsindry avy amin’ny manampahefana Kazakh · Global Voices teny Malagasy
Mitarika ainga-vao ho an'ny fampahalalam-baovao malaza ny fanerena sy ny sivana.
Voadika ny 26 Oktobra 2021 3:07 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, عربي, English, Español, English
Tonian-dahatsoratry ny Hola News teo aloha Zarina Akhmatova nandritra ny antsafa niresahany momba ny fanakanana ny tranonkalan'izy ireo. Mivaky toy izao ny fanazavana hoe “Mpisera tsy manam-paharoa miisa 1,5 tapitrisa no mitsidika ny tranonkala Holanews.kz isam-bolana.” Pikantsary avy amin'ny fantsona YouTube Dergachyov Insight.
Tao anatin'ny ora nikatonan'ny Facebook tamin'ny 4 Oktobra lasa teo, dia tapaka saingy tsy avy amin'ny olana ara-teknika ny iray tamin'ireo tranonkalam-baovao malaza indrindra ao Kazakhstan, Hola News. Tsy nohazavain'ny tompon'andraikitra velively ny zava-misy momba ny anton'ny fanakatonana naharitra 10 andro ity.
Tamin'ny 4 Oktobra, namoaka lahatsoratra iray momba ny fanadihadiana nataon'ny OCCRP momba ireo orinasa ivelan-tsisitany ara-ketra izay inoana fa misy ifandraisany amin'ny filoham-pirenena teo aloha ilay tranonkala izay arahin'ny mpisera ana hetsiny ao amin'ny tambajotra sosialy.
Noho ny fanahiana fa sao misy ifandraisany tamin'ity lahatsoratra ity ny fanakanana, dia nanapa-kevitra ny hamafa izany tao amin'ny miliny tamin'ny 5 Oktobra ireo mpanorina, Alisher Kaidarov sy Adilet Tursynbek, ary ny tonian-dahatsoratra Zarina Akhmatova. Ny ampitson'io, nanamarika izy ireo fa toa Deep packet inspection (DPI), teknolojia ampiasain'ny governemanta matetika hanivanana ny votoaty amin'ny aterineto, no nahatonga ny fanakanana.
Navoakan'izy ireo ny lahatsoratra foana izay nitovy tamin'ny filazana manjo fa tsy ilay lahatsoratra tany am-boalohany. “Ity ny lohateny,” “ity ny sary,” ary “ity ny vatan'ilay lahatsoratra,” hoy ilay pejin-tranonkala manivan-tena ankehitriny namerimberina. Eo amin'ny faran'ny pejy, ny horonantsary YouTube no hany nampiana hoe “Tsy misy zavatra tsara kokoa eto amin'izao tontolo izao!” izay hira fampidirana amin'ilay sariitatra Sovietika avy amin'ny Mpihira an-tanànan'i Breme.
Pikantsarin'ilayy lahatsoratra nosivanina izay ao amin'ny Hola News amin'izao fotoana.
Toa tahaka ny soratra manambara ny fisian'ny Hola News, teraka tamin'ny taona 2018 tao anatin'ny tontolo feno fankahalana ho an'ireo mpampahalala vaovao ao Kazakhstan izany. Vao tafaverina an-tserasera ny tranonkala, raha ny marina dia nametra-pialana i Kaidarov, Tursynbek, sy Akhmatova tamin'ny fanambarana ampahibemaso manameloka ny fanerena azy ireo.
Tsy maintsy nahafoy ireo fitsipika fototra [amin'ny fitaondroana ny marina sy ny tsifitongilanana] izahay rehefa avy nosakanana nandritra ny 10 andro. Nesorinay tamin'ny tranonkala ilay lahatsoratra. […] Izany no antony hiheveranay fa tsara kokoa ny miala toy izay mijanona amin'ny toerana misy anao ihany.
Namoaka fanambarana tamin'ny fomba ofisialy manohitra ny fanakanana ny Hola News tany amin'ny tranonkalan'ny Minisiteran'ny Serasera ny Adil Soz, kiadin'ny fahalalahana maneho hevitra eo an-toerana.
Fepetra henjana natao tamin'ny Hola News ny fanakanana, indrindra raha fantatra fa nitantara ny vaovao nitovy tamin'izany ny mpampahalala vaovao hafa ary naka tahaka sy nizara ny lahatsoratra ôrizinaly navoakan'ny Hola News ny tranonkala Semey City.
Niady hevitra ireo mpandinika raha “iray amin'ny karazany” na “fampitandremana ho an'ny hafa” ilay hetsika. Nilaza tamin'ny Global Voices i Nurzhan, mpandalina politika izay nangataka tsy hitonona ny anarany feno fa “mety nataon'ny governemanta lasibatra ny Hola News noho izy be mpanaraka.” Ankoatra ireo mpitsidika isam-bolana mahatratra 1,5 tapitrisa ao amin'ny tranonkalany, manana mpanjohy marobe ao amin'ny tambajotra sosialy ihany koa ny Hola News.
Tamin'ny tatitra farany indrindra momba ny Fahalalahana amin'ny Aterineto nataon'ny Freedom House, nosokajiana ho tsy misy fahalalahana i Kazakhstan noho ny sakana ataony amin'ny fidirana sy ny famerany ny votoaty. Asongadin'ilay tatitra fa tsy maintsy manao ny fanivanan-tena raha mbola te hisokatra ireo tranonkala matetika.
Mieli-patrana ny fanivanan-tena amin'ny fampitam-baovao, eny fa na dia any amin'ireo mpampahalala vaovao an-tserasera tsy miankina aza, satria matetika misy tsy mazava ny lalàna.
Hampibaribary ireo fifanarahana manjavozavo mahasahana ireo olona miharihary ara-politika ao Kazakhstan ny fiporitsahan'ny Pandora Papers, manana angondrakitra efa ho 3 teraoctets niparitaka tamina antontan-taratasy miisa 12 tapitrisa avy amin'ireo mpamatsy tolotra any amin'ny faritra ivelan-tsisitany. Raha izany no izy dia fampitandremana ihany ny fanakanana ny Hola News, satria mety hisafidy ny hanivan-tena ny hafa amin'ny fanadihadiana mety hataony.
Ankoatra ny lalàna vaovao sy ny tsy fisian'ny fitaovam-piarovana misy any an-toeran-kafa, voaporofo fa tontolo mpankahala mpanao gazety i Kazakhstan. Ny sasany nokendrena tamina rindrambaiko fitsikilovana, toy ny naseho tamin'ny fanadihadiana momba ny Tetikasa Pegasus tamin'ny volana Jolay.
Mety hiafara toy ny nahazo ireo seha-baovao maro hafa ny Hola News izao, izay tsy maintsy nisafidy ny fanivanan-tena noho ny fahaleovan-tena mba hisokafany.